AUTUMATIC CONTROL SYSTEM, China AUTUMATIC CONTROL SYSTEM Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - NingBo COFF Machinery Co., ltd
ZVINOKOSHA ZVINOGONESESA SYSTEM
Chinyorwa mashandiro ne push bhatani switch-yehunyanzvi vanochera Tembiricha kudzora: PT-100 kubatana kune tembiricha metres ine tembiricha yekumisikidza. Kana tembiricha inosvika pakuvira l ...
Chinyorwa mashandiro ne Push bhatani switch-yehunyanzvi mabheki
PT-100 kubatana kune tembiricha metres ine tembiricha yekumisikidza. Kana tembiricha yasvika padanho rekugadzika, iyo solennoid vharafu inozovhara otomisa kupisa. Yedu sisitimu inoshandisa Omron tembiricha mita iyo inogona kuita PID kumisikidza, kuti isvike pakuisa tembiricha zvinyoro uye ita zvakanakisa tembiricha kudzora.
PLC inobata skrini system PLC
PT-100 inosangana nePLC, vabiki vanogona kuverenga tembiricha paPLC, zvakare vanogona kuita tembiricha kumisikidza, nguva yekupisa pamwe nekubatana nemamota pane yekubata skrini, kuitira kubatsira vabiki kuti vabudirire kuita kwakaomarara chiito.
Iyo sisitimu inoshandisa Nokia frequency frequency inoshandura uye PLC kuita USS kutaurirana, iyo inogona kunongedza kumisikidza iyo kutenderera kumhanya pane yekubata skrini, uye zvakare kugadzirisa iyo tenderera kumhanya kweye frequency switcher neinobaya bhatani pane frequency convertor pani.
Electromagnetic kuyerera mita module:
Iyo sisitimu zvakare inogona kusanganisa yemagetsi kuyerera mita, inobatsira bheriya kuziva iyo chaiyo-nguva kuyerera chiyero pamwe nehoriyamu yakazara yemvura, izvo zvinowedzera iwo mwero wakaringana mune mashing maitiro.
Yakazara otomatiki sisitimu ine mabikirwo-echitsva hunyanzvi doro amateur:
Iyo sisitimu inosanganisa akasiyana mabikirwo ekumisikidza, ese mavhavha uye ekudzora mayuniti anonyatso kuwana otomatiki kutonga. Mushandisi anongoda sarudza mhando yedoro redoro ne'oush0buttonstart'the system ichaita mashandiro ekuita zvichienderana nemaresipire otomatiki.
Mushandisi zvakare aigona kuisa maparamende mukati mekubata skrini, senge huremu hwemera, huwandu hwemvura, tembiricha inovira, nguva yekumirira, kumhanyisa kwemusanganisi wemota pamwe nekusanganisa nguva.
Iyo sisitimu inogona kurekodha tembiricha parameter ine curve chati inomiririra.
Brewhouse Control Panel Chinyorwa Chekuzarura
MANUAL OPERATION NEMAITIRO SYSTEM